အစိမ်းရောင် ရင်ဖုံးလေးနဲ့ မြန်မာ ဝတ်စုံလေး နဲ့ ကြွေစရာ ကောင်းအောင် လှလွန်းနေ တဲ့ ခင်ရတီသင်း…. – Shwe Naung
အစိမ်းရောင် ရင်ဖုံးလေးနဲ့ မြန်မာ ဝတ်စုံလေး နဲ့ ကြွေစရာ ကောင်းအောင် လှလွန်းနေ တဲ့ ခင်ရတီသင်း….
N N | September 3, 2021 | Celebrity | No Comments
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ လက်ရှိမှာ အောင်မြင် လျက် ရှိနေတဲ့ photo model တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး ချစ်စရာ ကောင်းလွန်းတဲ့ မြန်မာ ဝတ်စုံလေး တွေနဲ့ social media လောကမှာ ခေတ်စား နေပြီး မြန်မာ ဝတ်စုံ ပုံ ရိ ပ်ေ လးတွေကို လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာ ထက်ကို တင်ပေး လေ့ရှိတဲ့ ခင်ရတီသင်း ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အမိုက်စား ဖက်ရှင် လေးတွေ အလန်းစား ဖက်ရှင် လေးတွေ ကို ဝတ်ဆင် လေ့ရှိပြီး ချစ်စေ ရာ ကာင်းလွန်း တဲ့ အပြုံးလေးတွေ ကို ပိုင်ဆိုင် ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ သူမကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေး ကို အခိုင်အမာရ ယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ photo model တစ်ယောပဲ ဖြစ်ပါတယ်။.
ယခုအခါမှာ လည်း မြန်မာ ဝတ်စုံ ခါးတို လေးတွေ နဲ့ အရမ်း လှတဲ့ ပုံတွေကို တင်ပေး လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ယောကျာ်းလေး ပရိသတ် တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှုရော မိန်းကလေး
ပရိသတ် တွေရဲ့ ချစ် ခင် အားပေးမှုကိုပါ အခိုင်အမာရ ယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ သူမကတော့ အမိုက်စားပုံ ရိပ်လေးတွေကို ပရိသတ် တွေရဲ့ ရှေ့ကို ချပြ လေ့ရှိပါတယ်။
သူမကတော့ ယခုမှာ အသညျးယား လောကျအောငျ ဆှဲဆောငျမှု ရှိလှနျးနတေဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ ပရိသတျ တှရေဲ့ရငျကို လှုပျခပျသှားစခေဲ့ပါတယျ။ သူမရဲ့ လှတျလပျပေါ့ပါးတဲ့ ဖကျရှငျလေးနဲ့ ခစြျစ ရာေ ကာ ငျးလှနျးန ခေဲ့တဲ့ ပုံရိပျလေးတှ ဟော ပရိသတျတှ ကေို အခစြျတှေ ပိုစခေဲ့တာပဲ ဖွစျပါတယျ။
ခစြျ ပရိသတျတှအေ တှကျ ရဲ့ ကွှလေော ကျစရာ ကောငျးလှနျးတဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ လှပ နတေဲ့ ခငျရ တီသငျး ရဲ့ အမိုကျစား ပုံရိပျလေးတှကေို ပွနျလညျဖောျပွပေးလိုကျပွီး အဆိုပါ ပုံရိပျလေးတှကေို အောကျမှာကွညျ့နိုငျပါတယျ။
အလန်းစား ဖက်ရှင်လေးနဲ့ ဖွေးဥနေတဲ့ အသားအရည်လေးတွေ ပေါ်အောင် ပိုစ့်ပေးနေတဲ့ နန်းဆုရတီစိုးရဲ့ အလှ ပုံရိပ်လေးများ……..
မော်ဒယ်လ် စူးရှထက်ရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး…..
ဖွေးဥနုနေတဲ့ အတွင်းသား အလှများကို ပရိသတ်တွေ မြင်အောင် ပိုစ့်ပေး ကြမ်းနေတဲ့ မော်ဒယ်လ် မေရတီဇော်ရဲ့ အလှ ပုံရိပ်လေးများ………..
တောင့်တင်းလှတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးနဲ့ ဆက်ဆီကျကျ လှပနေတဲ့ မော်ဒယ်လ် အယ်လာရဲ့ အလှ ပုံရိပ်လေးများ………….
ဆက်ဆီကျကျ ကိုယ်လုံးလေးနဲ့ အထာကျကျ လှပနေတဲ့ မော်ဒယ်လ် L လစ်ရှားရဲ့ အလှ ပုံရိပ်‌လေးများ………..
မြင်းစီးရတာ အရမ်းပျော်ဖို့ ကောင်းတဲ့ ဆိုတဲ့ captionလေးနဲ့အတူ ပုံရိပ် အလန်းစား လေးများ တင်ပေးလာတဲ့ နန်းမွေစံ………
ရှည်လျားလှတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးနဲ့ ကောက်ကြောင်း အလှအပများ အထင်းသား ပေါ်လွင်နေတဲ့ ချောကလျာရဲ့ အကိတ် ပုံရိပ်လေးများ…….
ထပ်ခါထပ်ခါ ပြန်ကြည့် ချင်လောက်အောင် ဆက်ဆီကျကျ ပိုစ့်အမိုက်စားတွေ ပေးနေတဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာရဲ့ အကိတ် ဗီဒီယိုလေး………